Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Soo kabashada Tirada Rakaabka ayaa kasocota FRAPORT
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Fraport waxay heshaa magdhow masiibo ah oo kusocota howlaha garoonka diyaaradaha ee Frankfurt
Garoonka diyaaradaha ee FRAPORT gawaadhida xamuulka qaada waxay arkeen koboc xoogan oo dheeri ah, iyagoo hoosta ka xariiqaya booska FRA oo ah xarunta ugu sareysa hawada hawada Yurub. Madaarada Fraport Group ee aduunka oo dhan sidoo kale waxay diiwaan galiyaan guulaha taraafikada.
The Jaantusyada Wadooyinka ee Fraport laga bilaabo Juun 2021 waxay muujinayaan soo kabasho cad oo ku jirta Lambarada Rakaabka.
Bishii Juun 2021, taraafikada rakaabka ayaa sii waday inay soo kabato, in kasta oo ay sii socoto saameynta baahsan ee cudurka faafa ee Covid-19.
Gegada diyaaradaha ee Frankfurt (FRA) waxay u adeegtay ilaa 1.78 milyan oo rakaab ah bishii warbixinta.
Lambarada taraafikada ee FRAPORT waxay u taagan yihiin koror ku dhowaad 200 boqolkiiba iyo Juun 2020.
Si kastaba ha noqotee, shaxdani waxay ku saleysan tahay qiime jaban oo hoose oo la diiwaan geliyey Juun 2020, markii taraafikada ay hoos u dhacday iyadoo ay kor u kacday heerarka infekshanka ee Covid-19. Bishii warbixinta, hoos u dhaca heerarka dhacdooyinka Covid-19 iyo qaadista xaddidaadda safarka ayaa sii waday inay si togan u saameyn ku yeelato baahida taraafikada. Markii ugu horreysay tan iyo markii cudurka dillaacay, Madaarka Frankfurt wuxuu mar labaad soo dhoweeyay in ka badan 80,000 oo rakaab ah hal maalin, oo la duubay laba maalmood oo kala duwan Juun 2021.
Markii la barbardhigo cudurka safka ka hor bisha Juun 2019, FRA waxay diiwaangelisay hoos u dhac kale oo muuqda oo rakaab ah oo ah 73.0 boqolkiiba bishii warbixinta.1 Intii lagu jiray qeybtii hore ee 2021, FRA waxay u adeegtay ilaa 6.5 milyan oo rakaab ah. Marka la barbardhigo isla mudada lixda bilood ee 2020 iyo 2019, tani waxay ka dhigan tahay hoos u dhac 46.6 boqolkiiba iyo 80.7 boqolkiiba siday u kala horreeyaan.
Taa bedelkeeda, kororka xawaaraha gawaarida xamuulka ee FRA ayaa sii socday inkasta oo ay jirto yaraanta awoodda caloosha ee sida caadiga ah ay bixiso diyaaradaha rakaabka. Bishii Juun 2021, xamuulka la soo mariyey (oo ka kooban hawo-hawo la'aan iyo hawo-mareen) ayaa u kordhay 30.6 boqolkiiba sanadkii ilaa iyo sanadkii 190,131 metric tons - muggii labaad ee ugu badnaa ee abid laga diiwaan geliyo bishii Juun FRA. Marka loo eego Juun 2019, xamuulka wuxuu ahaa 9.0 boqolkiiba. Kobacaani xoogan wuxuu hoosta ka xariiqayaa booska garoonka diyaaradaha ee Frankfurt oo ah xarunta ugu sareysa hawada hawada Yurub. Dhaqdhaqaaqa diyaaraduhu waxay kor u kaceen wax ka badan 114 boqolkiiba sanadkiiba illaa 20,010 duullimaad iyo soo degitaan. Iskudarka culeyska qaadashada ugu badan (MTOWs) wuxuu kordhay 78.9 boqolkiiba qiyaastii 1.36 milyan metrik ton bishii Juun 2021.
Garoomada diyaaradaha ee Fraport Group ee kuyaala aduunka ayaa sidoo kale diiwaan galiyay kororka taraafikada Juun 2021. Garoomada diyaaradaha qaarkood, taraafikada ayaa kordhay boqolkiiba boqol - inkasta oo lagu saleeyay hoos udhaca heerka taraafikada Juun 2020. Tirada rakaabka dhamaan garoomada diyaaradaha ee Fraport faylalka caalamiga ah. wali waxay aad uga hooseeyeen heerarka safka hore ee faafa bishii Juun 2019.
Madaarka Ljubljana ee dalka Slovenia (LJU) wuxuu soo dhoweeyay 27,953 rakaab ah bishii warbixinta. Garoomada diyaaradaha ee Brazil ee Fortaleza (FOR) iyo Porto Alegre (POA), wadarta taraafikada waxay fuuleen rakaab gaaraya 608,088. Caasimadda Peru, Lima Airport (LIM) ayaa ku soo dhoweysay 806,617 rakaab bishii Juun 2021.
14-ka garoon diyaaradeed ee Griiga waxay u adeegeen qiyaastii 1.5 milyan oo rakaab ah Juun 2021. Xeebta Badda Madow Bulgaariya, wadarta guud ee garoomada Twin Star ee Burgas (BOJ) iyo Varna (VAR) waxay sare u kacday 158,306 rakaab ah. On the Riviera ee Turkiga, Madaarka Antalya (AYT) wuxuu arkay taraafikada oo u koraysa qiyaastii 1.7 milyan oo rakaab ah. Qiyaasta rakaabka ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee Pulkovo ee ku yaal magaalada St. Petersburg (LED) ee dalka Ruushka ayaa gaadhay ilaa 1.9 milyan. Shiinaha, Madaarka Xi'an (XIY) wuxuu diiwaangaliyay faa iidada taraafikada ee 31.8 boqolkiiba sanadkiiba illaa kudhowaad 3.5 milyan oo rakaab ah.
Isku soo wada duuboo, AYT iyo garoomada Giriigguba waxay heleen ku dhowaad rakaab badan sida garoonkeenna saldhigga ee FRA bishii Juun 2021, halka rakaab badan ay ku safreen XIY. Tani waxay muujineysaa waxqabadka firfircoon ee galka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Fraport.
Ha ku xidhin 'maaskaro khaldan' Eurostar ...
Hoos u dhigida Qiimaha Silsiladda Sahayda Hawada iyo ...
Bahamas wuxuu u magacaabay I. Chester Cooper inuu noqdo Wasiirka cusub ee ...
Socdaalka UK aad buu qaali u yahay
Warbixinta shaqooyinka Mareykanka: Dib -u -soo -kabashada aan firaaqada ahayn iyo ...
Iibinta taleefannada casriga ah ee Samsung ayaa mamnuuc ka ah Ruushka
2021 Top 10 Goobaha Cunnooyinka Caalamiga ah ayaa shaaca laga qaaday
Dalxiiska Seychelles oo u diyaargaroobaya IFTM Top Resa ee ...
St. Eustatius - Saba - Sint Maarten cusub ...
Towers -ka Xakamaynta Taraafikada Hawada ee Scotland: Maya Qorshe B